कोर्स वा शैक्षिक संस्था परिवर्तनका बारेमा जिज्ञासा लिएर हरेक दिनजसो विद्यार्थीहरू शैक्षिक परामर्शदातालाई भेटिरहेका हुन्छन् । उस्तै प्रकृतिका प्रश्नहरू धेरै आएकाले केही महिना पहिले ‘नेपालीपत्र’मा प्रकाशित यी प्रश्नोत्तरलाई यस अंकमा पुनः प्रकाशित गरिएको छ ।
केही उदाहरणहरूसहित विद्यमान नियमहरूलाई प्रष्ट्याउने प्रयास यहाँँ गरिएको छः
१. म स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिङ सिस्टममा आवद्ध ‘ए’ युनिभर्सिटीमा ‘इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट स्टडिज’मा मास्टर्स डिग्रीको लागि पढ्न भनेर तीन महिना पहिले अस्ट्रेलिया आएको हुँँ । यहाँँ आएपछि मात्र थाहा भयो कि म पढ्न आएको विषय पीआर लिस्टमा रहेनछ । फेरि यो युनिभर्सिटी धेरै महंगो पनि रहेछ । म ‘बी’ कलेजमा भर्ना भएर ‘कुकरी’ पढ्न चाहन्छु । मेरो मामाले पछि आफ्नो रेस्टुरेन्टबाट स्पोन्सर पनि गरिदिन्छु भन्नु भएको छ । के यसरी शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्दा मेरो भिसालाई केही फरक पर्दछ ?
स्ट्रीमलाइनबाट ननस्ट्रीमलाइनमा जान लाग्नुभएको र मास्टर्स डिग्रीबाट डिप्लोमा वा सर्टिफिकेट ४ मा झर्न खोज्नुभएको स्थिति हेर्दा म तपाईंको भिसा रद्ध हुने सम्भावना धेरै देख्दछु । तपाईंलाई दिइएको भिसा मास्टर्स लेभलमा ‘इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट स्टडिज’ पढ्नको लागि हो, कुकरी पढ्न होइन ।
२. त्यसो भए म कुकरी पढ्नकै लागि भनेर फेरि भिसा अप्लाई गर्छु नि त?
तपाईं त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ । तर, अध्यागमन विभागले तपाईंको आवेदन हेर्दा तपाईं सक्कली विद्यार्थी हो कि होइन भनेर मुल्यांकन गर्ने गर्दछ । तपाईंले पहिले पढ्न खोजेको विषय र अब पढ्न खोजेको विषय र तिनको तहमा ठूलो अन्तर छ । त्यस कारणले तपाईंलाई अर्को भिसा नदिन सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ ।
३. यसरी महंगो युनिभर्सिटीमै पढ्नुपर्छ भनेर बाध्य पार्नु अन्यायपूर्ण भएन र ?
कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा पढ्नको लागि आवेदन दिएपछि उसलाई तपाईं राम्रो विद्यार्थी हो भन्ने विश्वास भएमा उक्त शैक्षिक संस्थाले तपाईंलाई पढ्न आउनको लागि अफर लेटर पठाउँछ । उक्त अफर लेटरमा तपाईंले कुन–कुन समयमा कति फी तिर्नुपर्छ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको हुन्छ । अफर लेटर पढेर फीलगायत सबै शर्तहरू बुझेको छु भनेर तपाईंले सही गरेपछि मात्र तपाईंको भर्ना प्रक्रिया र त्यसपछि भिसाको पक्रिया सुरु भएको हुन्छ । त्यसैले अस्ट्रेलिया आइसकेपछि कोर्स महंगो भयो भनेर गुनासो गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन् ।
४. म अहिले आइटीमा दुई वर्षे मास्टर्स डिग्री गर्दैछु । मेरो युनिभर्सिटी म बसेको ठाउँँबाट धेरै टाढा छ । मलाई यहाँँको पढाइ पनि खासै चित्त बुझेको छैन । म यहाँँ पढ्न थालेको ६ महिना पुगेपछि घर नजिकैको युनिभर्सिटीमा भर्ना भएर पढ्न चाहन्छु । दुवै स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिङमा आवद्ध शैक्षिक संस्थाहरू हुन् । के मैले फेरि अर्को भिसाको लागि आवेदन दिनुपर्दछ ?
पर्दैन । यदि तपाईंलाई दोस्रो युनिभर्सिटीले भर्ना दिन्छ र तपाईंले त्यही लेभलको कोर्स त्यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले पुनः अर्को भिसाको लागि आवेदन दिनु जरूरी छैन ।
५. म अहिले मास्टर्स गर्दैछु । मैले पढाइ सुरु गरेको चार महिना भयो । अर्को कलेजमा पढ्न जानको लागि रिलिज लेटर मागेको थिएँ तर मलाई युनिभर्सिटीले रिलिज लेटर दिएन । के सीओइ रद्ध गर्न लगाएर अन्त जान पाइन्छ ? भर्ना नै रद्ध भएपछि त केही फरक नपर्ला नि ?
सीओइ रद्ध गराएर तपाईं पुनः कहाँँ पढ्न जादंै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो महत्वपूर्ण हो । सामान्यतयाः स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिङ अन्तर्गतकै शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएर मास्टर्स तहकै कोर्समा पढ्दै हुनुहुन्छ भने खासै फरक पर्दैन । तर, यो बाहेकका अन्य अवस्था जस्तै तल्लो तहको कोर्स पढ्न थालेको वा नन स्ट्रीमलाइन शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएको या यी दुवै अवस्था हो भने तपाईंको भिसा रद्ध हुन सक्छ । माथि मैले स्ट्रीमलाइन अन्तर्गतको शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएर त्यही तहमा पढ्नुभयो भने फरक नपर्ला भने तापनि व्यवहारिक रूपमा हेर्दा एउटा शैक्षिक संस्थाले रिलिज लेटर नदिएर भर्ना रद्ध गरेको विद्यार्थीलाई स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिङ अन्तर्गतको अर्को शैक्षिक संस्थाले तुरुन्तै भर्ना गर्ने सम्भावना ज्यादै न्युन रहन्छ ।
६. म अहिले ब्याचलर्स डिग्री गर्दैछु । मैले पढाइ सुरु गरेको १ वर्ष भइसक्यो । के अब बाँकी दुई वर्षको पढाइ मैले नन स्ट्रीमलाइन कलेजबाट गर्न मिल्छ?
मिल्छ । यदि १ वर्ष पूरा गरिसक्नुभएको हो भने त्यही तहको बाँकी पढाइ अर्को जुनसुकै शैक्षिक संस्थाबाट गरे पनि खासै फरक पर्दैन ।
७. यसरी नन स्ट्रीमलाइनमा परिवर्तन गरेको कारणले पछि पोस्ट–स्टडी वर्क भिसा नपाइने त हुँदैन ?
त्यस्तो हुँदैन । पोस्ट स्टडी वर्क भिसा पाउनका लागि स्ट्रीमलाइनमा आवद्ध शैक्षिक संस्थामै पढेको हुनुपर्ने त्यस्तो कुनै नियम छैन ।
८. मैले जुलाईबाट एमबीए सुरु गरेको थिएँ । तर अब यो कोर्स छाडेर यही युनिभर्सिटीमा मास्टर अफ अकाउण्टिङ सुरु गरौँ कि भन्ने सोच्दैछु । के यसो गर्दा मेरो भिसालाई केही फरक पर्ला ?
यदि तपाईंको युनिभर्सिटीले तपाईंलाई मास्टर अफ अकाउन्टिङ्मा पढ्न दिन्छ भने कोर्स परिवर्तन गर्दा खासै फरक पर्दैन ।
९. मैले नयाँँ विषय पढ्न थालेँ भनेर इमिग्रेशन डिपार्टमेन्टलाई खबर गर्नु जरूरी छ?
तपाईंको शैक्षिक संस्थाले नयाँँ सीओइ जारी गरेको रेकर्ड इमिग्रेशन डिपार्टमेन्टमा स्वतः रहने हुनाले तपाईंको जस्तो अवस्थामा इमिग्रेशन डिपार्टमेन्टलाई खबर गरिरहनु जरूरी छैन ।
१०. म नन स्ट्रीमलाइन अन्तर्गतको शैक्षिक संस्थामा मास्टर्स गर्दैछु । पढाइ सुरु भएको ६ महिना कटिसकेको छ । के अब म शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र छु ?
तपाईंको केसमा प्रिन्सिपल कोर्स सुरु गरेको ६ महिना भइसकेको हुँदा शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्न अहिले पढिरहेको शैक्षिक संस्थाको स्वीकृती लिइरहनु जरूरी छैन । तर, तपाईंले छानेको नयाँँ कोर्सको भिसा सवक्लास भने एउटै हुनुपर्दछ ।
यस स्तम्भमा दिइएका जानकारी पूर्ण, अद्यावधिक र सबैका लागि उपयुक्त नहुनसक्छन्। कुनै निष्कर्षमा पुग्नु वा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अध्यागमन विभागको वेबसाइट, माइग्रेशनसम्बन्धी परामर्श दिने वकील वा रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेन्टबाट आवश्यक जानकारी लिनु उचित हुन्छ। लेखक रजिष्टर्ड माइग्रेशन एजेन्ट (MARN 1172267) हुन्। तपाईंका पनि कुनै जिज्ञासा छन् भने info@nepalipatra.com.au मा पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ। (सम्पादक